Kamed |dị | Ningbo Care Medical Instruments Co., Ltd.
Dị mfe ma dị irè
Abụ m Chandler, Onye guzobere ika KAMED. Ọ bụ akara m ji eme ọnụ. Mgbe m gara leta ndị ahịa m na mba ofesi, ha na-ajụkarị ihe kpatara eji akpọ ya KAMED? Ọ nwere ihe pụrụ iche ọ pụtara? Azara m ee. Ọ bụ akụkọ dị ogologo banyere m na ndị mụrụ m. N'oge ahụ, ncheta m gara n'oge ahụ…
Afọ 2003 — N’ụbọchị ikpeazụ nke ngụsị akwụkwọ nke mahadum m, ndị SARS kpachara anya. Ọtụtụ ndị ọrụ ahụike na-alụ ọgụ n'atụghị egwu n'ihu agha nke ịlụ ọgụ megide SARS. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọrụ ahụ ike tụfuru ndụ ha dị oké ọnụ ahịa na agha a, anyị, ndị na-achọ ịgụsị akwụkwọ na mahadum ahụ ike, ghọtara na anyị nwere nnukwu ọrụ ma dịkwa njikere ịnwale. Anyị tụrụ anya na anyị ga-agụsị akwụkwọ ma sonyere ndị dọkịta ozugbo enwere ike, tinye ike anyị ịzọpụta ọtụtụ ndị ọrịa, ma weghachite udo na ịdị jụụ mbụ nke ụwa a. Otú ọ dị, maka m, na mgbakwunye na otu nchegbu dị ka ụmụ klas m, enwerekwa nchegbu karịa ndị ikwu m.
Nne m na nwanne m nwoke bi na Guangzhou, mpaghara SARS kachasị emetụta, na egwu ha na-ebute ndụ ha oge ọ bụla. M na-akpọ nne m na obi mgbakasị ahụ kwa ụbọchị. Mgbe akpọrọ oku ahụ, obi m kwụgidere n ’ụlọ nọ na mberede, na-enwe a likeụrị dịka nwatakịrị nọ n’aka nne m, na-enwe mmetụta ịhụnanya na ịhụnanya furu efu kemgbe. Ọ dabara nke ọma, nnukwu ndị ọrụ ahụike edozigoro SARS mgbe m gụsịrị akwụkwọ. Anyị niile ji ndụ ọhụrụ a ike jisiri ike kpọrọ ihe. Kemgbe ahụ, a kụrụ mkpụrụ n’ime obi m: lekọta ezinụlọ m anya nke ọma ma mepụta akara ga-enyere m aka ịmụ ihe ga-abara ọtụtụ ndị mmadụ uru.
Afọ 2005 —— Mgbe m nọrọ ọzụzụ afọ abụọ n’ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ, amụtara m ọtụtụ ihe banyere ọgwụ, gụnyere ihe ndị e ji agwọ ọrịa, ngwa ọgwụ, usoro e ji emepụta ihe, na ụzọ eji eji ngwa ọgwụ. Afọ abụọ nke ahụmịhe ọrụ mere ka m mara otu m ga-esi mezuo nrọ m ngwa ngwa ma nwee ike itinye ihe m mụtara n'ọrụ. Ya mere, akwụsịrị m ọrụ m ma malite njem m na-aga azụmaahịa na Nọvemba nke afọ ahụ. M guzobere ụlọ ọrụ a na-akpọ CARE MEDICAL. Alaghị m azụ n'ịhọrọ aha a. N'ihi na ọ fọrọ obere ka onye m hụrụ n'anya nwụọ, na-enyere m aka ịmalite nghọta na ibu ọrụ siri ike ilekọta ezinụlọ m anya karịa ka ọ dị na mbụ. Enwere m olile anya na ụlọ ọrụ m ga-agbasa ọkwa nke mkpa na enweghị atụ nke ndị ikwu ha nye ọtụtụ ndị na-eto eto. Nkwalite mgbasa ozi anyị bụ: Ikwesiri ka elebara gị anya nke ọma…. N’ezie, ọ dị mkpa ka a na-elekọta ezinụlọ gị nke ọma karị, ma ị gaghị enwekwa ibu ọrụ dịịrị ezinụlọ gị.
N’afọ 2007 - N’otu ụbọchị nkịtị, papa m kpọrọ m oku. Ọ gwara m banyere ọbara ya na-agba ọbara. Mma nsọsọp n̄kpọn̄ se n̄kanamde nnyụn̄ nda enye nnennen nnennen ẹka ufọkibọk. N’ụzọ dị mwute, a chọpụtara na nna m mere agadi nwere ọrịa cancer nke eriri afọ. N’oge nna m gara ụlọ ọgwụ, m na-edebe ihe niile n’aka ma na-anọnyere ya kwa ụbọchị. Mgbe m hụrụ na ngwa ahịa na akụrụngwa dị iche iche m rere dị ka nke nna m, achọpụtara m na mberede na ọ bụ m na-ahụ maka ndị niile na-eji ngwaahịa m. Ọrịa ọ bụla batara n'ụlọ ọgwụ na-etinye olileanya na ọdịnihu na ngwaahịa ndị a, ọkachasị ndị ọrịa kansa. Mgbe mụ na mmadụ niile nọ n’eluigwe na-akparịta ụka, ha kwuru na ha kwenyere na sayensị na ndị dọkịta. Ha nwere nkwenye siri ike iji luso ọrịa ahụ ọgụ. Mkparịta ụka ndị dị otú a metụtara mkpụrụ obi m nke ukwuu ma mee ka m kwere na nkwalite okwu dịka isi na ịdị mma gaa na nke ziri ezi. O di nwute, nna m hapuru m rue mgbe ebighi ebi. Ka o sina dị, amụtawo m na anyị ga-enwerịrị ala iji nweta oke zuru oke nke ngwaahịa ọ bụla iji zụọ ahịa, na-ewetara ọtụtụ mmadụ olileanya na ịma mma.
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ n'echiche siri ike nke ibu ọrụ na ọrụ mmekọrịta ọha na eze. Yabụ, n'ime usoro azụmaahịa siri ike nke ihe karịrị afọ iri, mmepe ngwaahịa anyị na nhọrọ ndị na-ebubata ngwaahịa agafeela nyocha. N'ihe banyere njikwa mma, nkwenkwe anyị bụ: ngwaahịa ndị na-erughị ụkpụrụ agaghị ebupụta, ngwaahịa ndị na-erughị ụkpụrụ anaghị atụ aro. N'ihe banyere ndị mmekọ imekọ ihe ọnụ, nhọrọ anyị bụ: ụlọ ọrụ ndị na-enweghị echiche nke ime ihe n'eziokwu na njikwa mma agaghị emekọ ihe ọnụ iji gbochie ngwaahịa ndị rere ure na-asọba n'ahịa. Nkà ihe ọmụma nke ụlọ ọrụ anyị bụ ịzụlite ngwaahịa ndị dị mma ma dị irè maka ndị na-azụ ahịa. Anyị na-akwụsị ngwaahịa ndị megidere nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ anyị n'ihi na ọ bụghị naanị na ha enweghị ike imeju ahụmịhe nke ndị na-azụ ahịa kamakwa ọ na-emerụ uru mmekọrịta nke ụdị anyị. KAMED abụghị naanị akara, kama ọ bụ nkwenkwe na àgwà bara uru nke na-achụso izu okè ma ghara imebi iwu.